Raha ny fitomboan'ny varotra, Shanghai Kaiquan dia laharana faha-15 nandritra ny 15 taona nisesy tao amin'ny indostrian'ny paompy China ary tamin'ny 2019 dia 850 tapitrisa USD ny volan'ny vondrona. Miaraka amin'ny fanampian'ny rafitra ERP & CRM, KAIQUAN dia manome vahaolana matihanina ho an'ny mpanjifa rehetra amin'ny tsena ivelany. Ankoatr'izay, KAIQUAN dia nanangana tambajotra serivisy nasionaly miaraka amin'ireo orinasa sampana fivarotana 32 sy masoivoho 361. Ny famokarana vokatra mifaninana sy azo antoka ho an'ny mpanjifa mahafa-po no laharam-pahamehana voalohany an'i Kaiquan.
Vokatra lehibe: Paompy misintaka misaraka, paompy mikoriana mifangaro mifangaro, paompy mikitroka Axial mitsivalana, paompin-drano famahan-drano vovo, paompy banga boribory rano, paompy miompana multistage mitsivalana, paompy mampiroborobo ny rano, tontonana sy rafitra fanaraha-maso, paompin-drano mivezivezy, paompy condensate, karazana pompana ampiasaina ao indostria famokarana angovo nokleary.
Adiresy: No. 4255, Caoan Road, Distrikan'i Jiading, Shanghai, Sina
Tamin'ny taona 2008, ny Kaiquan Group dia nividy Hefei Sanyi Motor & Electrical Pump Co., Ltd. nanova ny anarany hoe Hefei Kaiquan Motor & Electrical Pump Co., Ltd. Izy io dia mahatratra 270.000 metatra toradroa sy velarana fananganana 230.000 metatra toradroa ho an'ny famokarana. . Amin'izao fotoana izao dia manana mpiasa maherin'ny 1500 izy izay ahitana injeniera 278 sy injeniera zokiny 56. Misy fanandramana mandroso, fanaraha-maso ary famolavolana fotodrafitrasa motera sy paompy rendrika eto.
Vokatra lehibe: Moto rendrika, paompy azo totohondry, paompy maloto, paompy miady amin'ny afo, paompy mikitroka Axial azo alentika, paompy mikotroka mifangaro mifangaro, rafitra fonosana azo alentika, tontonana fanaraha-maso, paompy misaraka, paompy tokana sns.
Adiresy: No. 611, Làlana Tianshui, Distrikan'i Hefei Xinzhan, tanàna Hefei, Faritanin'i Anhui, Sina
Vokatra lehibe: Ny paompy slurry rehetra ampiasaina amin'ny Minging, famokarana arintany, zavamaniry herinaratra, fitrandrahana rano, Alumina ary indostria hafa.
Adiresy: Faritra indostrialy ao amin'ny faritanin'i ZHENGDING, faritanin'i Hebei, Sina
Shengyang Kaiquan dia manana fitaovana famokarana sy fanandramana tonga lafatra, mpiasan'ny fitantanan-draharaha tena tsara, fitantanana henjana sy fandaminana izay miorina amin'ny fomba fiasa sy antontan-taratasin'ny rafitra iraisam-pirenena IS09001 manome antoka ny hanome vokatra tsara ho an'ny mpanjifa manerantany.
Vokatra lehibe: API610 Paompy dingana simika mahafeno ny fepetra takiana amin'ny API6107 ANSI B73.1M sy IS02858
Adiresy: 4, 26faha Làlana, Distrikan'i Shenyang ET, tanàna Shenyang, faritanin'i Liaoning, Sina
Vokatra lehibe: Paompy tokana, paompy mitsivalana, paompy mitsoka farany
Adiresy: Faritra indostrialy atsinanana eropeana, faritany Yongjia, tanànan'ny Wenzhou, faritanin'i Zhejiang, Sina